Caddeyn: Ma qiyaano la isla ogaa ayey aheyd misse xafiiska Gobolka Banaadir ayaa isku dhex yaacay? - Caasimada Online
Home Warar Caddeyn: Ma qiyaano la isla ogaa ayey aheyd misse xafiiska Gobolka...
Caddeyn: Ma qiyaano la isla ogaa ayey aheyd misse xafiiska Gobolka Banaadir ayaa isku dhex yaacay?
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa dhawaan idinla wadaagnay inuu si casilay Agaasimihii Waaxda Dab-damiska dowlada hoose Xamar Cabdullaahi Maxamed Cabdulle ( Saney) kaasoo maamulka Gobolka Banaadir ku eedeeyey inay shaqaalaha mushaar sii waayen.
Waxaa haddana lasoo saaray qoraal uu ku saxiixnaa Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale taasoo taariikh ahaan ku asteesneyd 4 Bishaan 2017, inkastoo ay tahay taariikh lasoo dhaafay haddana maanta ayaa si rasmi ah loo soo saaray waxaana lagu caddeeyey waraaqdaan in xilkii laga qaaday Agaasimihii Waaxda Dab-damiska dowlada hoose Xamar Cabdullaahi Maxamed Cabdulle Saney oo isna saxaafadda la wadaagay inuu is casilay.
Midda yaabka noqotay ayaa ah in isla waraaqda lagu sheegay in Saney loo magacaabay Agaasimaha Waaxda Arrimaha dibada ee dowlada hoose sida kaaga muuqato waraaqda taasoo macnaheeda ilaa hadda la fahmi waayey.
Dadka falanqeeyo siyaasadda ayaa arrintaan ku tilmaamay inay muujineyso isku dhex yaaca ka jiro xafiiska Guddoomiyaha Gobolka Banaadir halka dadka qaar ay aaminsan yihiin in waraaqdaan loo qoray qaab deg deg ah oo aan laga fiirsan.
Labada arrin oo is keeni la’ ayaa ah inuu Saney Maamulka Gobolka Banaadir ku eedeeyo inuu mushaarka shaqaalaha bixin waayey haddana uu Guddoomiyaha Gobolka Banaadir xil kale u magacaabo taasoo keentay wareero iyo jawi la fahmi waayey.
Waxaa la filayaa inuu arrintaan si deg deg ah uga hadlo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo isaga saxiixiisa ay waraaqdaan kusoo baxday.